घट्यो मूल्य : पल्सर सिरिजको सबैभन्दा कान्छो पल्सर १२५ को बिक्री सुरु, मासिक ६ हजार रुपैयाँ किस्तामा ! – Gorkhali Dainik
March 23, 2021 314
चार वर्ष’अघि सम्म पनि रिटा गाभिओला, एक १३ वर्षकी किशोरी सडकमा माग्दै हिँड्थिन् । तर विगत चार वर्षदेखि उनी संसारको उत्कृष्ट ब्रान्ड:सँग एक मोड’लको रुपमा आबद्ध भएकी छिन् । उनी चर्चित रियालिटी शोमा अभिनय पनि गर्छिन् । साथै, इन्स्टाग्रा’ममा उनको लाखौ फलो’अर्स पनि छन् । उनले यस्तो सफ:लता एउटा तस्बिर:का कारण प्राप्त गरिन् ।
रिटाको यो रोच:क कहानी सन् २०१६ मा सुरु भयो । त्यतिबेला उनी आफ्नो र परिवा:रको पेट पाल्न लुकबा:नस्थित मा’ग्दै हिँड्थिन् । उनका बुवा फोहोर टिप्ने काम गर्थे र आमा उनीलगायत ६ सन्तानको हेरविचा’रका लागि घरमा नै बस्थिन् । उक्त घर’को कोही पनि बच्चा स्कूल गएका छैनन् । उन’को परिवार’लाई खान नै धौधौ थियो त्यस’कारण रिटाले मानिसहरुसँग पैसा वा खानेकुरा माग्ने गर्थिन् ।
Prevसाहसी महिला सदिक्षालाई सुरक्षा थ्रेड, अमेरिका जान रोक्ने तयारी, गरिन यस्तो खुलासा (भिडियो )
Nextअछाममा दुखद घटना! मोवाइल चार्जमा राखेर फिल्म हेर्दैथिइन्, अचानक मोवाईल प’ड्किँ’दा किशोरीको मृ त्यु